ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) – ကွန်​ပျူတာအတွက်​ အင်္ဂလိပ်​စာ – ၅ | MoeMaKa Burmese News & Media
Charles Babbage was considered the originator of the modern computer. Between 1813 and 1823 , he designed and builtasmall calculator that could tabulate certain mathematical computations to eight decimal places. Still,he could never complete his two early computers : the difference engine and the analytical engine .
အင်္ဂလိပ်​လူမျိုး သင်္ချာပညာရှင်​နှင့်​ တီ​ထွင်​သူ ချားလဘက်​​ဘေ့ ၁၇၉၂ – ၁၈၇၁ သည်​ ကွာခြားခြင်းစက်​ဟု အမည်​တွင်​​သော ပထမဦးဆုံးကွန်​ပျူတာကို ၁၉ ရာစု ​စော​စောပိုင်းက တည်​​ဆောက်​ခဲ့သည်​ ။ ထိုစက်​တွင်​လှုပ်​ရှား​သော အစိတ်​အပိုင်းများ နှစ်​​ထောင်​​ကျော်​ ပါဝင်​သည်​။ ထိုကွာခြားခြင်းစက် စီမံကိန်းကို အစိုးရက ပံ့ပိုး​ပေးသည်​။ သို​သော် ​ချားလဘက်​​ဘေ့သည် ​ထိုစီမံကိန်းအ​ပေါ်တွင် ​စိတ်​၀င်​စားမှု ကွယ်​​ပျောက်​သွား
ချားလဘက်​​ဘေ့ကို​ ခေတ်​သစ်​ကွန်​ပျူတာကို အစပျိုးခဲ့သူဟု အားလုံးက အသိအမှတ်​ပြုသည်​။ ၁၈၁၃နှင့်​ ၁၈၂၃ ကြားတွင်​ သူသည်​ ​သေးငယ်​​သောဂဏန်းတွက်​စက်​တစ်​ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲ၍ တည်​​ဆောက်​ခဲ့သည်​။ ထိုဂဏန်းတွစက်​သည်​ အချို့သော ပုစ္ဆာများကို ဒသမ ရှစ်​​နေရာအထိ တွက်​ချက်​ မှတ်​သားနိုင်​သည်​။
Fund (N,v) – ​ငွေ​ကြေး။​ ထောက်​ပံ့သည်​။
Interest (N, v) – စိတ်​၀င်​စားမှု၊စိတ်​၀င်​စား​စေသည်​။
lose interest – စိတ်​၀င်​စားမှု​ ပျောက်​သွားသည်။
Analytical (adj) – သရုပ်​ခွဲ
instruct (v) – ညွှန်​ကြားသည်​။
According to – —- အရ။ အ​ကြောင်း​ကြောင့်​
according to instructions – ညွှန်​ကြားချက်​များအရ ။ ညွှန်​ကြားချက်​များအတိုင်း။
Code (N) – လျှိ့ဝှက်​သ​င်္ကေတ
Devote (v) – မြှုပ်​နှံသည်​။
He devoted many years – သူသည် ​နှစ်​​ပေါင်းများစွာကို မြှုပ်​နှံသည်​။
dissapoint (v) – စိတ်​ပျက်​​စေသည်​
Idea (N) – သ​ဘောတရား။ အယူအဆ
Complete (v) – ပြီးစီးသည်​
Fortune(N) – စီးပွား​ရေး။​ ငွေ၊စည်းစိမ်​။
Modern computers still use these basic ideas. – ​ခေတ်​သစ်​ကွန်​ပျူတာများသည် ​ယခုထက်​တိုင်